‘नाइ नभन्नु ल ३’ लाई टक्कर दिन ‘हवल्दार सुन्तली’ को यस्तो ट्रेलर, शसक्त भुमिकामा शिल्पा ! (ट्रेलरसहित) « रंग खबर
‘नाइ नभन्नु ल ३’ लाई टक्कर दिन ‘हवल्दार सुन्तली’ को यस्तो ट्रेलर, शसक्त भुमिकामा शिल्पा ! (ट्रेलरसहित)
रंग खबर, काठमाण्डौं । ब्राण्ड भ्यालु बनाएको फिल्म ‘नाइ नभन्नु ल ३’ संग प्रतिष्पर्धामा रहेको निर्माता छविराज ओझा निर्मित फिल्म ‘हवल्दार सुन्तली’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । यि दुई ठूला ब्यानरका फिल्म एकसाथ आगामी चैत २७ गतेदेखि प्रदशर्नमा आउँदैछन् ।
‘नाइ नभन्नु ल ३’ को ट्रेलर सार्वजनिक हुनुअघि नै छविराजले ‘हवल्दार सुन्तली’ को दुई मिनेट लामो ट्रेलर सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक ट्रेलरमा नायिका शिल्पा पोखरेललाई शसक्त भुमिकामा देख्न सकिन्छ । शिल्पाका अलावा दुई नायक सविन श्रेष्ठ र किशोर खतिवडा समेत ट्रेलरमा देखिएका छन् । तर फिल्म नारी प्रधान भएकाले शिल्पा नै ट्रेलरमा हावी भएकी छिन् । यसअघिको फिल्म ‘लज्जा’ मा शिल्पाको डबिङ नराखेका छविले यो फिल्ममा भने उनकै स्वर डबिङ गराएका छन् । त्यसैले ट्रेलरमा शिल्पाको आफ्नै स्वर सुन्न सकिन्छ ।
ऋषि लामिछाने निर्देशित ‘हवल्दार सुन्तली’ सत्य घटनामा आधारित फिक्सनल बायोपिक फिल्म हो । यो फिल्म र विकास आचार्य निर्मित ‘नाई नभन्नु ल ३’ एकसाथ प्रदशर्नमा आउँदा दुवै निर्मातालाई घाटा हुने निश्चित छ । तर दुवै निर्माता नेपाली फिल्म नगरीमा सफल निर्माताका रुपमा चिनिने भएकाले पनि उनीहरुले यो लडाईलाई व्यवसायिक रुपमा मात्र नभएर प्रतिष्ठाको लडाईका रुपमा समेत लिएका छन् । त्यसैले दुवै चैत २७ को मितीबाट पछाडी सर्ने र हार मान्ने पक्षमा छैनन् । यसले कसलाई फाइदा र घाटा पुर्याउने हो त्यो त समयले बताउने नै छ । कि कसो ?
‘नाई नभन्नु ल ३’ लाई टक्कर दिने ‘हवल्दार सुन्तली’ को ट्रेलर यस्तो छ :-
Nepali Movie Release Calendar: Updated
जानकारीको लागि तलको लिंक थिच्नुहोस् Nepali Movie Release Calendar 2079
पहिलो सिजनको सफलता पछि ‘तिम्रो ल्याङ्ग ल्याङ्ग २’ को ट्रेलर सार्वजनिक
रंगखबर, काठमाडौँ : लामो समयको ग्याप् एवंम पहिलो सिजनको सफलता पछि वेब सिरिज ‘तिम्रो ल्याङ्ग
गोपालजंगको ‘भत्ता पचाउन’ ~ भिडियो ~
रंगखबर, काठमाडौँ – लोकदोहरी गायक गोपालजंग थापाले नयाँ गीत ‘भत्ता पचाउन’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
आयो मीना र मञ्जुको तीज गीत ~ भिडियो ~
रंगखबर, काठमाडौँ – पार्श्वगायिका मीना निरौला र लोकगायिका मञ्जु पौडेलले यो वर्षको तीजको लागि नयाँ